Akwụkwọ edemede Sarah Saker na Martech Zone |
Edemede site na Sarah Nwachukwu
E nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa ecommerce n'ebe ahụ - ị bụ otu n'ime ha. Are nọ n'ime ya ruo ogologo oge. Dị ka ndị dị otú a, ọ dị mkpa ka ị nwee ike ịsọ mpi kachasị mma nke narị otu narị puku ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ugbu a na todayntanetị taa. Ma olee otu i si eme nke ahụ? Ikwesiri igba mbọ hụ na webụsaịtị gị na-adọrọ adọrọ dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na ezubere ya nke ọma, enweghị oke aha,